गर्भमा छोरी हुँदा आमालाई सधै त्रास भइरहने वातावरण अझै हट्न सकेको छैन नेपालमा । पछिल्लो समय नेपालमा भएका बलात्कार अनि बलात्कारपछि भएका घटनामा हरेक नेपाली आमाको आँखा आँसुले भिजाएको छ ।
ढुंगे युगबाट शुरू भएको मानवको अस्तित्व अहिले वैज्ञानिक युगमा छ । नेपालमा केही समयअघि बलात्कार न्यूनीकरण हुन्छ भनेर अश्लील सामग्री राख्ने वेबसाइटहरू बन्द गराइयो, यो एकदमै सकारात्मक कदम थियो । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना घट्नै नदिने उपाय सरकारी तवरबाट नखोजिनु चाहिँ नेपाली जनताको पीडाको विषय हो ।
अहिले आमाहरू छोरी जन्माएकोमा आफैंलाई धिक्कार्दै छन्, गर्भमा छोरी छ कि भनेर गर्भपतन गराउनेको पनि कमी छैन । आक्रान्त बनेको छ नेपाली आमाहरूको मन ।
कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्यायको निम्ति सामाजिक अभियान्ताहरू सडकमा उत्रिए । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्डको घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यहाँ दिनदहाडै, दिउँसै, रातमै चेली बलात्कृत भएका छन् । कति घटना प्रहरीमा आउँछन्, त कति भित्रभित्रै गुम्सिएर रहेका छन् । जबसम्म बलात्कार गर्ने बलात्कारी कडाभन्दा कडा कारवाहीको दायरामा आउँदैन, तबसम्म हरेक नेपाली आमाको मनमा शान्ति छाउँदैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा एसिड आक्रमणका घटनाहरू पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक् अनुसार विगत ७ वर्षमा १८ महिला र ४ पुरुषमाथि एसिड आक्रमण भएका छन् । एसिड आक्रमणमा पर्नेमा ८२ प्रतिशत युवती छन् । एसिड आक्रमणपछि बाँच्न त बाँच्लान् तर ती आक्रमणमा परेका व्यक्तिको जीवनशैली बन्द कोठाको अँध्यारो जस्तै हुने पीडितले नै बताउँदै आएका छन् ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार एकतर्फी प्रेमबाट उत्पन्न हुने इगोको भावनाले एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध निम्तिएका देखाएका छन् । आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिले आफू अनुकूल वातावरण पाउने बित्तिकै दूरासय भावले आक्रमण गर्ने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म भएका एसिड आक्रमणहरू प्रायःजसो युवतीलाई यातना दिने तथा कुरूप बनाउने हेतुले भएका देखिन्छन् । मानसिक रूपमा परेको यस्तो पीडालाई सहन नसकेरै धेरैले आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन् । पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने सरकारले अनाहकमा आफ्ना परिवार गुमाएका परिवारका अन्य सदस्यलाई सहानुभूति हुने निर्णय समेत गर्न सक्दैन ।
बारम्बार एसिड आक्रमणबाट किशोरीले ज्यान गुमाएको, शारीरिक अपाङ्ग भएको जस्ता घटना दोहोरिरहँदा पनि सरकारले एसिडको बिक्रीवितरणको नियमनमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन ।
नेपालमा कैयौ नीतिनियम नै फितला छन्, कडा बनेका नीतिनियम पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएर आइदिन्छन् । एसिड आक्रमण गर्नेलाई पनि खासै कडा कारवाही गरिएको चाहिँ पाइँदैन । यदि कडा कारवाही हुँदो हो त कि पटक–पटक घटना दोहोरिन्थे होलान त ?
पीडकलाई यस्तो कारवाही हुनुपर्छ कि अर्काे दोस्रो व्यक्तिले एसिड आक्रमण सम्झँदा पनि उसको हात थरथर कामोस् ।
महिलाहरू बलात्कार, एसिड आक्रमण साथसाथै देशका केही ठाउँमा बोक्सीको आरोपमा समेत समाजबाट बहिष्कृत भएका समाचार आइरहन्छन् । तर नियमन गर्ने निकायले यी विषयमा न त अध्ययन नै गर्छ, न त सकारात्मक सुधारको बाटो नै रोज्छ ।
बलात्कृत भएको चेली अनि एसिड आक्रमणमा परेकी चेलीको आमा मनमा फाँटेको धाँजो कसरी सिलाउने ? यस्तै घटना हेरेर कैयौ आमा मन र गर्भमा छोरी नहोस् भन्ने सोच्न थालिसके ।
हामी सामजिक, राजनीतिक रूपमा परिस्कृत समाजको खोजीमा लागिरहँदा एउटा छोरी भएकै कारणले अधिक पीडा पाएपछि बाँच्छुभन्दा पनि बाँच्न नपाउने त ! पीडितलाई न्याय दिलाउनका सट्टा पीडकलाई ढाकछोप गर्न प्रशासन तथा अन्य निकाय नै लागेपछि पीडितले न्याय कहिले पाउने ? गर्भमा छोरी छ कि भनेर आमाहरू कहिलेसम्म डराइरहने सरकार !